Andron’ny ronono: nampian’ny minisitera ny olona sahirana sy ny zokiolona | NewsMada
Andron’ny ronono: nampian’ny minisitera ny olona sahirana sy ny zokiolona
Par Taratra sur 12/06/2020
Andro iraisam-pirenena ho an’ny ronono, ny alarobia 10 jona teo. Nitondra fanampiana ny fianakaviana mipetraka eny amin’ny Akamasoa sy ny toby Foyer de vie Andrainarivo ny minisiteran’ny Fambolena sy ny fiompiana ary ny jono (Maep), ny alarobia lasa teo. Miisa 1 100 ny olona marefo sy ny zokiolona nisitraka izany, nomena ronono sy ny vokatra azo avy aminy. Niara-nifarimbona tamin’ny Maep nanatanteraka ity hetsika ity ny FAO, ny ONN ary ny mpiara-miombona antoka samihafa.
Lohahevitra noraisina tamin’ity fankalazana ity ny hoe « Ronono ho an’ny rehetra, loharanon’ny fahasalamana ». Nambara’ny talen’ny kabinetran’ny minisitera, Ramaroson Lova, fa vahoaka salama no afaka mandray anjara amin’ny fampandrosoana ny firenena. Ampirisihina ny rehetra hisotro ronono sy hihinana vokatra azo avy aminy, hampitombo ny hery fiarovana sy miady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo ».
Maro ny paikady entin’ny Maep hampiroboroboana ny lalam-pihariana ronono. Toy ny fampirisihana ny Malagasy hisetra tamin’ny fiompiana omby vavy beronono, ny fiarovana sy ny fanaraha-maso ny fahasalaman’ny omby, ny fanapariahana ny teknolojia fampanarahana entin-tanana na voajanahary, sns.